Inona no ampiasaina amin'ny menaka tetracycline? - BALLYA
Posted on Aprily 15, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no menaka manitra tetracycline?
Ampiasaina ny menaka tetracycline?
Ny votoatin'ny menaka maso tetracycline is tetracycline. Ny anarany simika dia: 6-methyl-4- (dimethylamino) -3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a, 5,5a, 6,11,12a-Octahydro -2-tetrabenzamide. Fomban-molecular: C22H24N2O8. Milanja molekular: 444.44.
BALLYA manome a fitsapana tetracyclines mba hilaza aminao raha misy residu tetracyclines amin'ny vokatra vita amin'ny ronono izayhaninao isan'andro.
Ity vokatra ity dia miseho ho menaka mavo na mavo maivana.
3. fepetra arahana
4. Pharmacology sy Toxicology
Ity vokatra ity dia mpiorina miady amin'ny bakteria marobe, izay misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny fifantohana betsaka. Rickettsia, mycoplasma, chlamydia ary spirochete maro no mora tohina amin'ity vokatra ity. Enterococcus dia mahatohitra izany.
Ity vokatra ity dia misy hetsika fanoherana bakteria sasany manohitra ny Neisseria gonorrhoeae, fa ny Neisseria gonorrhoeae mahazaka penicillin koa dia mahatohitra tetracycline. Nandritra ny taona maro, noho ny fampiharana betsaka ny tetracyclines, ny pathogens klinika mahazatra dia mahatohitra tetracycline, ary ny bakteria gram-positive toy ny staphylococci sy ny ankamaroan'ny enterobacteriaceae koa dia mahatohitra izany. Misy ny fanoherana eo anelanelan'ny vokatra sy ny karazana tetracycline isan-karazany. ny tetracycline rafitra fiasa amin'ity vokatra ity dia ny zava-mahadomelina afaka mamatotra manokana ny A toerana ny 30S subunit ny bakteria ribosome mba hanakana ny fitomboan'ny peptide rojo ary misy fiantraikany amin'ny synthesie ny bakteria proteinina.
Inona no atao hoe-tetracycline-menaka manitra
Fanosotra maso amin'ny tetracycline dia sakany lehibe antibiotika ary be mpampiasa amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Izy io dia afaka mamono amin'ny fomba mahomby ny bakteria Gram-positive sy ny bakteria Gram-negatif sasany. Izy io dia misy fiantraikany ara-pahasalamana ankolaka Pnemonia mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia sy Amoeba. Ny menaka Tetracycline dia ampiasaina amin'ny klinika amin'ny fitsaboana ny conjunctivitis, keratitis, blepharitis, trachoma, sns. Izy io koa dia mety handray anjara mavitrika amin'ny fitsaboana ny conjunctivitis mitaiza. Menaka fanosotra Tetracycline azo apetaka amin'ny hoditra, fonontselan-tsiranoka ary aretin-tratra mampivadi-po, izay misy vokany tsara amin'ny fanoherana ny fanaintainana.
Ny aretina mamaivay Conjunctival dia azo zaraina ho maranitra, tsy mitongilana ary mitaiza arakaraka ny toe-javatra sy ny fizotran'ny aretina. Raha ny antony, dia azo zaraina ho bakteria, viral, chlamydial, fungal ary mahazaka aretina, sns. Araka ny toetra mampiavaka ny conjunctiva, dia azo zaraina ho conjunctivitis follicular marani-tsaina, conjunctivitis follicular maharitra, membrane sy pseudomembranous conjunctivitis.
Ny etiology ny conjunctivitis dia azo zaraina ho sokajy roa: mifindra sy tsy mifindra.
Fahafatesana: fivontosana Conjunctival ateraky ny aretina mikraoba mikraoba.
Tsy areti-mifindra: ny fivontosan'ny alergika ateraky ny allergie eo an-toerana na eo amin'ny rafitra no be mpampiasa indrindra. Ny singa ara-batana sy simika ivelany toy ny maivana sy akora simika isan-karazany dia mety hanjary antony maha-pathogenika ihany koa.
B. Soritr'aretina klinika
Ny maso voakasik'izany dia manana fahatsapana amin'ny vatana vahiny, fahatsapana ho may, hodi-maso mavesatra ary fitomboan'ny tsiranoka. Rehefa voan'ny aretina ny kornea, dia mety hitranga ny photophobia, ny triatra ary ny fihenan'ny ambaratongan'ny fahitana.
Ny mampiavaka ny fitohanana vaskular conjunctival dia ny fanakaikezana ny fornix dia miharihary ny fitohanana. Ny lalan-dra dia zaraina amin'ny endrika net ary mena mamirapiratra, izay afaka mipaka amin'ny faritry ny kornea mba hamorona pannus kornea.
Ny tsiambaratelo purulent dia mahazatra indrindra amin'ny conjunctivitis gonococcal; mucosal purulent na catarrhal tsiambaratelo matetika hita ao amin'ny bakteria na chlamydial conjunctivitis, izay matetika mifikitra mafy amin'ny volomaso, ka manahirana ny manokatra ny hodi-mason'ny maraina; Ny fivoahan'ny rano dia matetika hita amin'ny conjunctivitis viral.
Ny fivontosana Conjunctival dia mahatonga ny lalan-drà conjunctival hitatra sy hivoaka, izay mitarika edema amin'ny tavy. Noho ny famaha ny conjunctiva bulbar sy ny fornix conjunctival tissue dia miharihary ny fivontosana rehefa edema.
Ny conjunctivitis hemorrhagic hemorrhagic vokatry ny virus dia matetika mety miaraka amin'ny hemorrhage subconjunctival.
Izy io dia marika tsy voafaritra amin'ny fivontosan'ny conjunctival. Izy io dia mety hita ao amin'ny konjunktiva amin'ny maso na limbus. Izy io dia manana endrika mosaic polygonal nisondrotra, ary ny faritra hyperemie dia nosarahan'ny sulcus hatsatra.
Follicle dia fotsy fotsy mavo, malama, misy boribory boribory misy savaivo 0.5 ～ 2.0 mm, fa amin'ny tranga sasany, toy ny chlamydial conjunctivitis, dia mety hiseho koa ny fololika lehibe kokoa; virus conjunctivitis sy chlamydial conjunctiva Ny fivontosana dia antsoina matetika hoe conjunctivitis follicular maranitra na conjunctivitis mitaiza follicular noho ny famoronana follicle mazava ho azy.
Membrane sy pseudo-membrane
Ny membranes dia alefan'ny cellulose miraikitra amin'ny tampon'ny conjunctiva. Mora esorina ny membrane pseudo, fa ny tena membrane kosa tsy mora misaraka. Mivoa-dra ilay ratra aorian'ny famoahana tery. Ny fahasamihafana tena ilaina eo amin'ny roa dia miankina amin'ny ambaratongan'ny fivontosana. Mafy kokoa ny fihetsika mamaivay. Diphtheria bacillus dia mety hiteraka conjunctivitis membrane mafy; streptococcus β-hemolytic, pnemonia, gonococcus, adenovirus, vatana fampidirana, sns.
Ny fahasimban'ny teboka matrix dia ny fototry ny histological ny famolavolana ny fery conjunctival. Ny scarring conjunctival aloha dia miseho ho toy ny conjunctival fornix narrowing sy conjunctival subepithelial fibrosis.
Teboka lymph preauricular mivonto
Ny conjunctivitis Virus dia matetika miaraka amin'ny node lymph preauricular nivonto.
Mihombo ny vatan'ny hodi-maso ambony noho ny fidiran'ny sela na fananganana fery, ka miteraka ptosis malefaka, izay fahita matetika amin'ny faran'ny trachoma.
Mahalana izy io ary azo jerena amin'ny fivontosana lava ateraky ny raboka, habokana, sifilis ary rickettsia.
Ny conjunctivitis dia mifindra amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fifandraisana, noho izany dia tokony hampirisihina ny fanasana tanana matetika mba hisorohana ny fikosehana ny maso. Soso-kevitra ny manasa ny tavanao amin'ny rano mandeha, misaraka lamba famaohana, mosara ary zavatra hafa amin'ny hafa, ary diovy sy hadio matetika izy ireo. Misy fepetra mitoka-monina tokony horaisina ho an'ireo marary voan'ny conjunctivitis, ary tsy azo atao ny milomano amin'ny toerana filomanosana ampahibemaso. Raha voan'ny conjunctivitis ny maso iray dia tsy maintsy tenenina ny marary hiaro ny maso salama amin'ny aretina. Ireo izay miasa amin'ny tontolo be rivotra, be vovoka ary mifoka dia tokony hanatsara ny tontolo iainana ary hanao solomaso miaro mba hisorohana ny conjunctivitis.
Ny fivontosan'ny kornea vokatry ny anton-javatra maro dia antsoina hoe keratitis. Izy io dia iray amin'ireo aretina mahazatra ao amin'ny ophthalmology ary iray amin'ireo aretina lehibe amin'ny fahajambana any Shina. Ny kornea dia eo an-tampon'ny volomaso ary mifandray mivantana amin'ny tontolo ivelany. Izy io dia mora tohina amin'ny fahasimbana avy amin'ny zavamiaina bitika, trauma, ary fanentanana ara-batana sy simika. Amin'ny lafiny klinika, dia misy soritr'aretina mahasosotra azy toy ny fahitana manjavozavo, fanaintainana, photophobia sy triatra, ary fahaverezan'ny fahitana mazava.
Ny fanadinana ophthalmological dia mampiseho ny fahaverezan'ny gloss kornea, ny fihenan'ny mangarahara, ary ny fitefy ulcer. Amin'ny tranga henjana dia mety hitranga ny perforation kornea, aretin'ny intraocular ary koa ny fahajambana. Amin'izao fotoana izao, ny keratitis dia mizara ho areti-mifindra, tsimatimanota, tsy fanjarian-tsakafo, aretin-kozatra sy fivontosana arakaraka ny antony mahatonga ny aretina. Ny keratitis mitondra otrikaretina dia miseho any amin'ny faritra afovoan'ny kornea, fa ny keratopathy miaro tena kosa dia mitranga mora foana amin'ny sisin'ny faritry ny kornea.
Ny areti-mifindra no antony matetika mahatonga ny keratitis. Ny zavamiaina bitika pathogenika dia misy bakteria (toy ny pneumococcus, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, gonococcus, sns.), Virus (virus herpes simplex, adenovirus, sns.), Fungi, Acanthamoeba, Mycoplasma, Chlamydia, Treponema pallidum Matetika ny aretina dia mitranga rehefa simba ny sela epithelie kornea, mandatsaka, na mihena ny fanoherana ny vatana. Ny epithelium kornea dia tena mora voan'ny areti-mifindra aorian'ny ratra.
Noho izany, ny vatan'ny vahiny kornea, ny fanosoran'ny kornea, ny fampiasana tsy fitoviana amin'ny lantom-pifandraisana, ny fifandraisan'ny maso amin'ny zava-mahadomelina voapoizina na ny loharanon'ny rano dia antony mora voan'ny keratitis areti-mifindra. Ireo mararin'ny diabeta, tsy fanjarian-tsakafo ary aretina mandany fotoana maharitra dia hiharan'ny keratitis ihany koa.
b. Antony anatiny
Izy io dia manondro aretina endogenous avy amin'ny vatana iray manontolo, toy ny aretina autoimmune sasany, na aretina hafa amin'ny rafitra (toy ny tsy fahampian'ny vitamina A, fahasimban'ny nerve trigeminal) miparitaka amin'ny kornea.
Ny kornea dia tsy misy lalan-dra, noho izany dia tsy mora ny manafika areti-mifindra. Na izany aza, ny tavy kornea dia mandray anjara amin'ny valin'ny hery fiarovana amin'ny vatana iray manontolo. Na dia ambany noho ny an'ny sela aza ny valin'ny hery fiarovany, dia miadana kokoa ny metabolisma ao aminy, ka mahatonga azy io hiova maharitra maharitra. Eo amin'ny fanjakana saro-pady, ka mora voan'ny areti-mandringana, toy ny keratitis vesicular.
B. fisehoana klinika
Ankoatra ny keratitis malemy, ny ankamaroan'ny marary manana keratitis dia manana soritr'aretina mahery vaika, toy ny fanaintainana, photophobia, triatra, ary blepharospasm. Ireo mararin'ny keratitis dia tsy vitan'ny hyperemia ciliary fa koa hyperemia iris. Amin'ny tranga henjana, ny edema dia mety hitranga amin'ny conjunctiva bulbar ary koa ny hodi-maso.
Ny soritr'aretin'ny keratitis vokatry ny antony samihafa dia samy hafa ihany koa. Ny keratitis bakteria dia manana ny fiandohana mafy indrindra ary ny soritr'aretina mahery vaika indrindra, miaraka amin'ny tsiranoka mitombo sy mihombo. Ny keratitis Viral dia faharoa aminy, tsy misy tsiambaratelo vitsivitsy, izay toy ny rano na moka; Ny holatra Keratitis no malefaka indrindra, ary indraindray dia mafy ny aretin'ny kornea, saingy tsy miharihary ny fahatsapan'ny marary. Ireo mararin'ny keratitis herpes simplex dia mety hamoy ny fahatsapana kornea.
Ny fivontosan'ny kornea dia tsy azo ihodivirana fa hisy fiantraikany amin'ny fahitana amin'ny lehibe kokoa na ambany kokoa, indrindra rehefa manafika ny faritry ny mpianatra ny fivontosana. Ny maratra kornea natsangana taorian'ny fery dia sitrana, tsy vitan'ny manakana ny fahazavana tsy hiditra amin'ny maso, fa manova ihany koa ny herin'ny curvature sy ny refresin'ny tampon'ny kornea, ka tsy afaka mifantoka amin'ny retina hamorona sary mazava ny zavatra, ka mampihena ny fahitana. Ny haavon'ny fidirana an-tsehatra dia miankina tanteraka amin'ny toerana misy ny fery. Raha eo afovoan'ny kornea no misy azy, na dia kely aza ny fery dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahitana izany.
Ny hoditra akaiky ny sisin'ny volomaso dia ny "hodi-maso". Ny fivontosan'ny volomaso sy ny sisin'ny hodi-maso nateraky ny fivontosana na ny otrikaretina bakteria dia antsoina hoe "blepharitis", izay iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny fahasosoran'ny maso ivelany. Ny marary dia mety hahatsapa ho may, sosotra ary mangidihidy amin'ny hodi-maso. Ny marary sasany aza dia misy fery manodidina ny hodi-maso sy volomaso latsaka.
Ny blepharitis dia matetika vokatry ny dermatitis seborrheic (aretin-koditra izay miteraka mangidihidy, dandruff, ary mamaivay) na aretina mikraoba.
Fihetseham-po may, mena ary mangidihidy manodidina ny hodi-maso.
Mipoitra eo amin'ny fakan'ny volomaso. Mavo sy matavy ny kirany avy amin'ny blepharitis seborrheic.
Indraindray ny volomaso dia mitombo amin'ny làlana diso na trichiasis. Ny blepharitis mamindra sasany dia mety miaraka amin'ny conjunctivitis.
C. Vondrona ahiana atahorana
Ny hodi-maso dia iray amin'ireo taova izay manafina ny fihary atiny. Ny fihary miafina ao amin'ny hodi-masony dia manafina tavy amin'ny tany ambonin'ilay tsiranoka mandatsa-dranomaso. Ny tanjony dia ny hampihenana ny etona-dranomaso, fa ny tsiambaratelo tafahoatra matetika dia miteraka blepharitis.
Amin'ny fahavaratra mamirifiry dia mitombo be ny hatsembohana sy ny fivoahan'ny vatana. Noho izany, ny olona tsy manana fidiovana manokana amin'ny maso, tsy miraharaha ny sakafo, matetika mihinana nendasina, nendasina ary sakafo hafa, dia tokony handinika manokana ny fisian'ny blepharitis. Satria ny soritr'aretin'ny blpharitis tany am-boalohany dia mitovy amin'ny an'ireo aretina ophthalmological rehetra, dia mora ny tsy jerena. Marary maro ao amin'ny sampam-pitsaboana no tsy voatsabo tsara, noho izany dia matetika izy ireo no mijaly noho ny soritr'aretin'ny blepharitis, fa mitohy miharatsy hatrany ireo soritr'aretina ireo.
Amin'ny tranga henjana dia miverimberina ny stye (mena sy mamontsina ny fihary menaka, fantatra matetika amin'ny hoe pinholes) na chalazion (fivontosan'ny fihary menaka tsy misy mena) ary na dia ny cellulitis aza. Ho fanampin'izany, ny soritr'aretin'ny blepharitis dia mety ho diso fanamarihana toy ny xerophthalmia, izay mampihemotra ny fitsaboana. Noho izany dia ilaina ny mampiasa jiro mitsivalana hijerena ny fiovan'ny hodi-maso hametrahana ny aretina.
Ny trachoma dia keratitis conjunctival infectious izay naterak'i Chlamydia trachomatis. Nantsoina hoe trachoma izy noho ny fisehoany misitery sy tsy mitovy eo ambonin'ny conjunctiva hodi-maso. Amin'ny dingana voalohan'ny aretina dia misy ny fidiran'ny conjunctiva, toy ny nonon-jaza sy ny hyperplasia follicular, ary ny tanim-bary. Amin'ny faran'ny dingana farany, ny conjunctiva amin'ny hodi-maso voadona dia voatrandraka, ka vokatr'izany dia miova ny hodi-maso, miitatra ny fahasimban'ny kornea, ary misy fiatraikany amin'ny fahitana ary miteraka fahajambana mihitsy aza. Ny vanim-potoana fanamoriana dia 5 ka hatramin'ny 14 andro.
Ny aretina dia aretina mitaiza mitaiza vokatry ny tsimokaretina Chlamydia trachomatis. Ny chlamydia trachomatis dia manafika ny konjunktiva amin'ny hodi-maso, izay mety manana hyperemia sy lalan-drà manjavozavo, hypertrophy nipple, hyperplasia follicular, pannus kornea, ary farany miafara amin'ny fery.
Matetika ny fisehoan'ny klinika. Ny marary dia manana fahatsapana amin'ny vatana vahiny, photophobia, mandriatra, ary moka kokoa na tsiranoka madioka moka. Rehefa afaka herinandro vitsivitsy dia mihena ny soritr'aretina maranitra ary miditra amin'ny dingana mitaiza. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ny mahazo aina na ny maso fotsiny no reraky ny havizanana. Raha sitrana na manasitrana ny tenany amin'izao fotoana izao dia tsy hisy ny sisa tavela.
Na izany aza, mandritra ny aretina mitaiza, matetika dia misy areti-mifindra miverimberina any amin'ny faritra misy ny endemika, ary mihombo ny aretina. Rehefa misy pannus mavitrika amin'ny kornea, dia mihamalalaka kokoa ny fahasosorana ary ho very ny fahitana. Amin'ny faran'ny faran'ny dingana dia miharihary kokoa ireo soritr'aretina, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fahitana ary na dia ny fahajambana aza noho ny sezela, toy ny entropion, trichiasis, valanaretina kornea ary eyeballs maina.
Chlamydia trachomatis dia mifatotra matetika amin'ny tsiambaratelon'ny mason'ireo marary. Izay mifandray amin'ity tsiambaratelo ity dia mety hiteraka trachoma. Noho izany dia tokony hamafisina ny fanaovana dokambarotra sy ny fanabeazana mba hikolokoloana fahazarana madio. Aza kosehina amin'ny tananao ny masonao, ary sasao sy ampetaory matetika ny lamba famaohana sy mosara.
Fanosotra maso amin'ny tetracycline misy vokany tsara amin'ny fivontosan'ny maso. Ary amin'ny fiainana andavan'andro dia tokony hitandrina ny fahadiovan'ny maso sy ny hoditra madio isika ary handray anjara amin'ny fanatanjahan-tena matetika mba hanamafisana ny fanoherana.
Torolàlana ara-pitsaboana: TETRACYCLINE, menaka manitra
Mayoclinic: Tetracycline (Làlan'ny Ophthalmic)